बजेटमा बिदेशबाट सुन ल्याउँदा नयाँ व्यवस्थाः सय ग्राम काँचो सुनमा कति तिर्नुपर्छ महसूल?
Posted: 2018-05-30 20:23:47
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- काठमाडौँ स् महसूल तिरेर पनि काँचो सुन ल्याउन नपाउने गरी दुई वर्षअघि लगाइएको प्रतिबन्ध यो वर्षदेखि हट्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विदेशबाट आउने नेपालीले सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था छ।...
आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर...
Posted: 2018-05-29 12:29:57
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - साताको तेस्रो दिन आज सुनको मूल्य यथावत नै छ । आज छापावाला सुन प्रतितोला ५८ हजार ७ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला ५८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तेजावी सुन ५८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज पनि सुन प्रतितोला ५८ हजार ४ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज पनि चाँदीको मूल्य यथावत नै रहेको छ । ...
सुन तस्करीः फ्लाइ दुबइ र थाइ एयरवेजबाट सुन आउँथ्यो
Posted: 2018-05-27 20:11:40
सुनाखरी न्युज/ विराटनगर — साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) ले सुन तस्करी गर्ने कार्य प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक पार्टीका ‘ठूला मानिस’ को मिलेमतोमा हुने गरेको बताएका छन् । जिल्ला अदालत मोरङमा बयान दिने क्रममा उनले यो खुलाएका हुन् ।...
सुनको मूल्यमा गिरावट...
Posted: 2018-05-27 12:23:46
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सय रुपैयाँ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन तोलामा ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आइतबार तेजावी सुन पनि प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेर ५८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । ...
सुन तस्करी र हत्या मुद्दाः आजै थुनछेक आदेश हुने सम्भावना
Posted: 2018-05-27 12:06:42
सुनाखरी न्युज/ विराटनगर — ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) का सम्बन्धमा आइतबार जिल्ला अदालत मोरङले थुनछेकको आदेश दिने सम्भावना छ । यसअघि शुक्रबारसम्म उनको बयान लिइएको थियो । आइतबार शाक्यलगायतलाई यातना दिइएको र सम्बन्धित अरु श्रव्यदृश्य सामग्री देखाएर थप बयान लिइने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।...